गर्भमा बच्चा रहँदा ९ महिना सम्म के गर्ने के नगर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
हाम्रो ब्रह्माण्डका ९ ग्रहहरूले आआफ्ना किरणबाट गर्भमा हुर्किरहेको बच्चालाई विकसित गर्न सहयोग गर्छन् । प्रत्येक ग्रहले आफ्नो स्वभाव अनुसार बच्चाको शरीरको विभिन्न भागलाई विकसित गर्छन् ।
यदि कुनै ग्रह गर्भमा हुर्किरहेको बच्चाको समय कमजोर छन् भने केही उपायद्वारा त्यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ । गर्भ रहेको पहिलो महिनाभरि शुक्र ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यदि गर्भावस्थाको समयमा शुक्र कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
गर्भावस्थाको तेस्रो महिना गर्भवती महिलाले दूध र गुलिया पकवान्नको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । यस्तै वस्त्रमा पहेंला वस्त्र धारण गर्नुपर्छ ।चौंथो महिना सूर्य ग्रहको प्रभाव रहन्छ । यो समयमा रस पिउने गर्नुपर्छ भने सिम्रिक रंगका वस्त्र धारण गर्दा सकारात्कता बढी रहन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःशास्त्र अनुसार सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो मानिन्छ !!!ःदिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।१. हनुमान चालिसाःहरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ ।
२. फलामको उपकरणःसुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो ।३. मुलाःसिरानी मुनी मुला राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिलल्छ । शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट रोक्छ ।
४. फूलःसुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ताजा महसुस हुने समेत शास्त्रले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।५. दुर्गा सप्तसतीःपाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा विहानमा उठ्दा ताजापन अनुभव समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।शक्ति शक्तिशाली हुन्छन् ।
यदि हामी सुत्दा उत्तर दिशातर्फ टाउको बनाएर सुत्यौ भने वा लगातार यस्तै अवस्थामा ६(७ घण्टा बितायौ भने, चुम्बकिय आकर्षणको दबाव हाम्रो दिमागमा पर्छ । यसले टाउकोको रक्तप्रवाहमा पनि पुरै प्रभाव पार्छ । चुम्बकिय आकर्षणको कारण टाउकोमा बढी रक्तश्राव हुन्छ, त्यही कारण तपाई उत्तेजित भएर उठ्नुहुनेछ । अर्थात तपाईंको निद्रा विचमै टुट्नेछ।यस किसिमको प्रभाव कति र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहि तपाईंको स्वास्थ्यमा पनि निर्भर गर्छ । यदि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ भने यसको असर तपाईंले अरु बढी झेल्नुपर्छ ।
दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।१. हनुमान चालिसाःहरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ ।